Ongorora Mapiro Anopa Seminari pane Kugadziridza Mumhanzi Dzidzo yeCOVID naDante Munguva yeNAMM 2021 | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Featured » Ongorora Mapiro Ekupa Seminari paKugadziridza Mumhanzi Dzidzo yeCOVID naDante Munguva yeNAMM 2021
Ongorora Mapiro Ekupa Seminari paKugadziridza Mumhanzi Dzidzo yeCOVID naDante Munguva yeNAMM 2021
Kudzidziswa paDante AV uye Dante Certification Matanho 1 uye 2 zvakare anowanikwa
Audinate iri kupa yemahara seminari panguva yeNAMM 2021 pamusoro wenyaya we "Kudzokera kuMimhanzi Dzidzo uye Nyanzvi Hupenyu Kuratidzira." Seminari inoongorora mashandiro anoita Dante akawanda emhando dzakasiyana dzemitambo yekurarama nepo achichengetedza kuremara kwenzanga uye nzvimbo yekugara inochengetedza vese.
Zvakare zviripo kuongororwa kutsva kweshanduko yeDante AV vhidhiyo-pamusoro-IP mhinduro kubva kuAudinate, uye Chikamu 1 ne2 yeiyo inozivikanwa Dante Certification Kosi. Izvi zvinoreva kuti zvisinei uine nyika, uye kunyangwe uine ruzivo rwakadii naDante, unogona kuwana kudzidziswa kwakakosha uye ruzivo rwekushandisa Dante mune chairo-nyika, kubatanidzwa kweAV-pamusoro-IP.
Seminari uye zvikamu zvekudzidzisa zvinorarama muna Ndira 18, zvisinei, vhidhiyo ichave ichiwanikwa pazvinodiwa kusvika munaKukadzi. Kunyoresa kwezviitiko kunowanikwa izvozvi ku www.music.com/NAMM21
Kudzokera Kumhanzi Dzidzo Zvino
Kana iwe waedza kushandisa Zoom Misangano yebhendi kana choir chiitiko, iwe unoziva kunonoka (latency) kweiyo system kwakanyanya kwazvo kumushandira pamwe wemimhanzi. Iwe waizokwanisa kuitirana, asi haugone kutamba pamwe chete. Nekudaro, yakaderera-latency Dante network anga ari chinhu chikuru chekurarama kugadzirwa kwemakumi gumi uye anogona kugadzirisa dambudziko izvozvi.
Joinha isu panhaurwa panokurudzira nyaya dzevadzidzisi vemimhanzi pachikoro chepamusoro uye kuyunivhesiti vachishandisa Dante kubatanidza vanoita kubva kunzvimbo dzakasiyana. Idzi ndidzo nyaya dzaunogona kudzokorora muchirongwa chako, nhasi. Zano pamusoro pekuronga nzvimbo, kubatanidza nzvimbo dzakawanda kuti ugone kuzadza ensembles ayo asisina kukwana mukamuri imwechete, uye kunyange nzira dzekuisa mari pane yako kambasi network zvichakurukurwa.
Chekupedzisira, isu tinoratidza kuti iyo Dante network yaunovaka icharamba ichishanda sei mumashure mekupararira nyika uye yova chishandiso chinogadzira mikana mitsva yekudzidzisa.
Kuunza Dante AV - Vhidhiyo yeiyo Dante Solution
Dante ndiyo odhiyo networking mhinduro inotyaira nyika yekuteerera, uye ikozvino Dante AV inounza vhidhiyo kuchikuva. Joinha isu kwechirongwa chekudzidzisa pane zvakanakira kubatanidza Dante odhiyo uye vhidhiyo pamwechete, uye ona kuratidzwa pane ino inoshamisa mhinduro nyowani!
Dante Kudzidzisa Nhanho
Dante Certification Chikamu 1: Dante ndiyo inotungamira yepasirese yeAV network solution uye iyo de facto standard mune yehunyanzvi kurira nhasi. Iyi kirasi inopa hwaro mune odhiyo, vhidhiyo uye netiweki pfungwa - uye zvinogona kunge zviri izvo zvese zvinodiwa kuti zviungane uye zvishande diki dante system pane imwechete, yakatsaurirwa switch. Mushure memusangano uyu, vanenge varipo vanofanirwa kuve nehunyanzvi zvakakwana kuti vapedze iyo Dante Level 1 Certification Bvunzo.
Dante Certification Chikamu 2: Iyi kirasi inoenderera kubva kunheyo dzenheyo kubva kuDante Certification Chikamu 1, 2021 Edition. Vapindi vanodzidza hunyanzvi hwekuvaka nekushandisa epakati-kusvika-makuru maDante network pamatanho mazhinji, aine mashoma maratidziro uye anogovera bandwidth nemamwe masevhisi. Mushure memusangano uyu, vanenge varipo vanofanirwa kuve nehunyanzvi zvakakwana kuti vapedze iyo Dante Level 2 Certification Bvunzo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Audinate, shanya www.nonline.com
Nezve Audinate Boka Limited:
Audinate Group Ltd (ASX: AD8) ine chiono kupayona ramangwana reAV. Audinate's mubairo unokunda Dante AV pamusoro pe IP networking mhinduro ndiye mutungamiri wepasirese uye anoshandiswa zvakanyanya mune yehunyanzvi mhenyu kurira, kuiswa kwekutengeserana, kutepfenyura, kero yeruzhinji, uye maindasitiri ekurekodha. Dante anotsiva tambo dzeanalogue tambo nekutumira zvakaringana maodhiyo nemavhidhiyo masaini kumatama makuru, kunzvimbo dzakawanda panguva imwe chete, asingashandisi chinhu chinopfuura tambo yeEthernet. Audinate inotungamirwa muAustralia uye ine mahofisi ematunhu muUnited States, United Kingdom neHong Kong. Dante tekinoroji inopa masimba zvigadzirwa zvinowanikwa kubva kumazana evatungamiriri veAV vagadziri pasirese. Zvikamu zvakajairika zvekambani zvinotengeswa paAustralia Securities Exchange (ASX) pasi pekodhi yetiki AD8
Dante uye Audinate zvikwangwani zvakanyoreswa zveAudinate Group Ltd.
Previous: Streamland Media Inoshambadzira Chinangwa Chekutora Technicolor Post Bhizinesi kubva kuTechnicolor
Zvadaro: MTJIBS ANOTORA PURE PASI PASI PANOGONESESA NEAGITO